Games ho an'ny ankizivavy Princess - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Games ho an'ny ankizivavy Princess
mampiseho ny andriambavy? Fantatsika fa izany no izy na dia tsy niteny azy mafy. Ary noho izany izahay, nanangona be dia be ny loko mahafinaritra ary ankehitriny faly hanatitra manan-karena fanangonana ny aterineto lalao Andriambavy, manasa anao hilalao maimaim-poana. Rapunzel, Cinderella, Snow White, Ariel sy ny satroboninahitra Olona mahafinaritra miandry anao priodenete azy ireo amin'ny outfits lehibe, dia hamolaka ny volo sy handravaka ny tsimany, hamely ny mety make-up sy manicure. Regalia tanteraka, izy ireo mandeha eo amin'ny daty iray nandrasana hatry ny ela-mpanjaka na ny mandeha any amin'ny toerana tsara tarehy.
Fotoanan'ny fotoana fanabeazana
Princess Juliet Fashion Olana
Cinderella ny Rush
Lalao Fanoloran-tena Princess Princess
Kawaii Princess Dress Lalao
Fialantsasatry ny ririnina
Andron'ny mpanasa lamba japoney
Sampan-draharaha momba ny Tranoben'ny Fashion Teen Princess
Goldie Princess Momeni teraka
Crazy Kich Asian Princesses
Fety Princesses & Balloon Festival
Lalao Andriambavy tamin'ny Category:
Farany Games ho an'ny ankizivavy Princess
Akanjo Fantasy momba ny Watercolor Fashionista
Fanadiovana ny tranon'ny Princess Coastal
Fantasy Fairy Tale Princess lalao
Andriambavy Tattoo Princess
Princess Prom Prom
Ny dian'i BBF mankany Venise
Lalao Online Rehetra Games ho an'ny ankizivavy Princess
Ny fiainana mafy ny royals
talohan'ny lasa vadin'ny mpanjaka, tsy maintsy mandeha ny mafy dalana ho any amin'ny andriambavy. Ara-dia afaka hamolaka ny eo ambonin'ny seza fiandrianana, nofonosina akanjo, mipetraka indray ka mandidia ny olona. Ary raha mbola tanora ianao, tsy maintsy;
mba handeha ao amin'ny ambany fifehezan'i ny dragona
hanoroka ny sahona rehetra ao amin'ny heniheny izy hitady ny enchanted mpanjaka
mba handeha amin'ny alalan'ny jousting Fifaninanana, raha ny tànany eo ambonin'ny fo sy be herim-po mahery fo miady
Na dia ny fialana tao amin'ny trano mimanda, rehefa ny toerana tena ampahany amin'ny maintsy fombafomba andriambavy. Ary raha mbola tsy niova ny sainao mba handeha hamaky izany rehetra izany, dia handray ny lalao ho an'ny zazavavy andriambavy.
Rehefa ao amin'ny sekoly royals beginners, dia fahazoan-dalana mba handinika:
Jasmine sy ny zazavavy hafa izay no hampianatra anareo ny fomba sasany, mampianatra ho tia ny manan-karena sy ny firavaka akanjo, mampiseho saobakaka toerana be mponina, hampahafantarana amin'ny malalaka mpanapaka.
Teo ambany ny tari-dalana hentitra ianao dia ho afaka haka ny mety fitafiana, fifantenana avy amin'ny fitafiana be dia be, izay efa niasa ny tsara indrindra mpamorona, mpanakanto. Avy hatrany dia manolotra ny vokatra mpanao kiraro miasa ihany ny mponina ny mpanjaka lapa, ary noho izany dia mahay manjaitra malefaka, tsara tarehy sy tena ahazoana aina kiraro. Ary ny firavaka afaka miresaka hiaina mandrakizay isika. Tsy manao caskets sy ny tratrany izy rehetra. Perla no namely ny hafotsiany sy tsara endrika, diamondra dia mamirapiratra madio, ary ny jamba maso, safira, emeraoda, voahangy, robina, Opal, ametysta sy vato manga, vatosoa sy ny maro hafa sy naka fanahy Nahasarika azy hamaha loko.
koa, ny tsara indrindra mitarika anao amin'ny alalan'ny mpianatra ny hatsaran-tarehy Salon, izay hanana ny matihanina fikarakarana hoditra sy ny volo fikarakarana. Hiatrika nandrehitra ny avy ao anatiny, misy fomba ho an'ny fanadiovana, hydration sy ny sakafo dia miteraka fahagagana. Taovolony ihany koa afaka hanova ny nahary, ary ianao ihany no eto dia hianatra momba ny lamaody indrindra sy ankehitriny styling. Ary ho toy ny farany mikasika mba hamita ny sarin'ny – pedicures sy manicures. Andriambavy tsy hanaraka ny hiara-mandeha voakaikitra fantsika, indrindra fa eo amin'ny tongony! Matokia ny manam-pahaizana na hamorona manokana dikan-manicure, dia manana rohy mankany azy avy amin'ny nanatitra fampiharana sy ny vato.
Ny mahavariana izao tontolo izao ny lalao Andriambavy
Toy ny marina rehetra andriambavy, ianao, mazava ho azy, te-hiaina tao amin'ny efitra iray no miresaka izay rehetra momba ny tombontsoa. Ny lalao ho an'ny ankizivavy andriambavy efa namandrika ho anareo ny mety fanaka, temotra sy ny ravaka, ka dia mitoetra foana hametraka izany rehetra izany ao an-toerana. Aoka hatao hoe tena tsy maintsy miaina ao isan'andro, ka jereo ny vokatry ny asany. Ho an'ny trano dia aina sy tony, ny zavatra rehetra dia tsy maintsy ho amin'ny tsirairay mifanaraka. Izany no mahatonga azy mora kokoa ny mahatakatra, aloha hifidy ny zavatra lehibe indrindra, ary hoisting azy tao amin'ny faritra voatondro, ary kely ary avy eo dia lasa mora kokoa ny toerana. Raha tsy tianao ny vokany, tsy misy zavatra mora kokoa noho ny manova ny zavatra eo amin'ny toerana.
Sakafo ho andriambavy, koa, dia manomana ny tsara indrindra mpahandro, ary raha tianao, dia afaka miova, izay tsy nianatra, ary dia hidirantsika ny dakozia mba handray ny fanasan'ny Tompo anjara mivantana. Sary an-tsaina ny fomba mahafinaritra dia rehefa ho nanompo teo ambony latabatra mofomamy be dia be voaravaka raozy, sarivongana sy ny tilikambo, mba izay nanana tanana ihany koa. Fa dia ho ny miafina. Fianarana manolotra andriambavy hanoratanao azy mamirapiratra loko, mba manolotra iray piozila, mahita fahasamihafana na mitovy karatra. Isika koa manana tenifototra, mitady piesy eo amin'ny sary sy ny Asa. Na oviana na oviana ny andriambavy leo, ary raha tsy afa-mandositra tsy ho eo ambanin'ny fanaraha-maso dia haneho ny tenany sy ny tantaram-pitiavana tsara tarehy mamorona toetra.